အိမ်မက်စေရာ: မပြီးဆုံး နိုင်သေးသော ပြောင်းလဲမှုများနှင့်
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 11:36 AM
အတ္တဆိုတာ နဲလာရင် လူ့ဘဝဆိုတာ နေသာလာပါတယ်.
ဂျက်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတ္တနဲအောင်ကြိုးစားတယ် တကယ်ပြောတာနော် အဓိက ကိုယ့်ကျန်းမာဖို့ပဲ
အစစ အဆင်ပြေပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ကွယ်...
ဘဝဆိုတာ ပျော်စရာတွေကြီး ဖန်တီးထားတာ မဟုတ်ဘဲ စိတ်ညစ်စရာနာကျင်ကြေကွဲစရာ၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးစရာတွေလည်း ရှိသေးတာလေ.
အဲဒါတွေပြီးရင် တစ်လှည့် ပျော်ရွှင်တာလေးတွေ လာမှာပါ။
မကြာ မကြာတော့ရောက်ဖြစ်ပါတယ် ... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ...ကောင်းဆုံးပြောင်းလဲခြင်း တစ်ခု လုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ... ။
ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာ ပြောင်းလဲရဲတဲ့ သတ္တိရယ် . . . ပြောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတာ သုံးသပ်နိုင်တဲ့ အသိအမြင်ရယ် . . . ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယ် သုံးမျိုး ပေါင်းစပ်နိုင်မှ အကောင်အထည်ပေါ်နိုင်တဲ့ ခဲယဉ်းကြီး တစ်ပါးပဲ အိပ်မက်ရေ . . .
ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တာမို့ အရှိန်ပြင်းပြင်း၊ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသဗျား . ..